पिज्जा मन पर्छ ? अब घरमै बसेर यसरी सजिलै बनाउनुहोस् स्वादिष्ट भेज पिज्जा - ज्ञानविज्ञान
पिज्जा आधुनिक खानाका परिकारमा सबैजसोको लागि प्रिय परिकार हो । आजकल रेष्टुरेन्टको मेनुमा खोजिने परिकार मध्ये पिज्जा पनि अगाडी आउँछ । पिज्जालाई घरमै पनि बनाउन सकिन्छ ।
मैदा, चिनी, नुन, तेल
मरिचको धुलो, पानी
सुरुमा मैदामा चिनी, नुन, मरिचको धुलो राखेर पानी राख्दै मुछ्नुपर्छ । मैदा मुछ्दा एकदमै ध्यान दिएर मुछ्नुपर्छ ।
एकैछिन मुछेपछी फेरी थोरै मैदा राखेर मुछ्नुपर्छ ।
मैदालाई गोलो आकार बनाउने । त्यसपछि एउटा भाँडोमा तेल लगाएर मैदा राख्ने । केही समय यत्तिकै छोपेर राखिदिने ।
अब पिज्जाको लागि सस तयार गर्नुपर्छ । सस बनाउँदा टमाटर पिसेर त्यसमा नुन, चिनी र केही मसला राख्नुपर्छ । टमाटरमा थोरै ओलिभ तेल पनि राख्नुपर्छ ।
एउटा प्यानमा तेल लगाउने र त्यो प्यानमा अघिको मैदाबाट केही भाग लिंदै हातले नै पीज्जाको आकार दिएर राख्ने ।
त्यसपछि त्यसमा सस राख्ने र सस राखेपछि चिज राख्ने ।
अब त्यसमा तरकारीहरु राख्ने ।
त्यसपछि ओभनमा राख्ने ।
गुड फ्राइडे मनाउने मुडमा हुनुहुन्छ र तपाईंको गन्तव्य काठमाडौंको बौद्ध एरिया हो भने पिज्जाको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ । पिज्जा र फ्राइड चिकनका पारखीका लागि नयाँ गन्तव्य बनिरहेको बौद्धस्थित क्राउन पिज्जा एन्ड फ्राइड चिकन तपाईंको उत्तम रोजाइ बन्नसक्छ । केएफसीका खाना मन पराउनेका लागि यो राम्रो विकल्प साबित भएको छ । पाँच वर्ष बेलायत बसेर स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यले फर्किएका युवा मदन फुयाँलसहित ६ जनाको समूहले क्राउन पिज्जा रेस्टुराँ स्थापना गरेका हुन् ।
आज शुक्रबार । गुड फ्राइडे मनाउने मुडमा हुनुहुन्छ र तपाईंको गन्तव्य काठमाडौंको बौद्ध एरिया हो भने पिज्जाको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ । पिज्जा र फ्राइड चिकनका पारखीका लागि नयाँ गन्तव्य बनिरहेको बौद्धस्थित क्राउन पिज्जा एन्ड फ्राइड चिकन तपाईंको उत्तम रोजाइ बन्नसक्छ । केएफसीका खाना मन पराउनेका लागि यो राम्रो विकल्प साबित भएको छ । पाँच वर्ष बेलायत बसेर स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यले फर्किएका युवा मदन फुयाँलसहित ६ जनाको समूहले क्राउन पिज्जा रेस्टुराँ स्थापना गरेका हुन् ।
क्राउनमा केएफसीको अनुभव बटुलेका लगानीकर्ता र कर्मचारी छन् । नेपालमा पिज्जालाई खाजाका रूपमा मात्र खाइने चलन छ । यो पनि लन्च वा डिनरका रूपमा खान सकिन्छ भन्ने कुरा स्थापित हुँदै गएको छ । पिज्जा कल्चर विकास भइरहेको यो समयमा आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खाना उपलब्ध गराइरहेको फुयाँलले बताए । विदेशी स्वाद भए पनि यसमा प्रयोग हुने अधिकांश सामग्री नेपाली छन् । यसले नेपाली उद्यमीलाई पनि प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । अर्डर गरेको सात देखि १० मिनेटमा फाइन डाइनिङमा खाना आइपुग्छ ।
फुल्ली डेकोरेटिभ रेस्टुराँमा पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चिकनका थरीथरी स्वाद पाइन्छ । मांसाहारीका लागि मात्र नभई शाकाहारीका लागि पनि भेज पिज्जाको फरक स्वाद क्राउनमा उपलब्ध छन् । स्वच्छ, सफा र सुन्दर सजावटमा स्थापित क्राउन पिज्जामा सानोतिनो गेट टुगेदरदेखि ७० जना क्षमता भएको डाइनिङ हल उपलब्ध छ । ठेलमठेल राजधानीको घुइँचोमा पर्याप्त पार्किङको सुविधा हुनु रेस्टुराँको विशेषता हो ।
तपाईंको बौद्ध क्षेत्रमा सधैं गइरहने काम नपर्न सक्छ । पिज्जा खानकै लागि धाएर जाने बानी धेरै थोरको होला । घरमै बसेर खान मन पराउनेले पनि यसको स्वाद लिन पाइनँ भनेर मन दुखाउनु पर्दैन । बिहान १० देखि राति १० बजेसम्म रेस्टुराँले खुलेको समयमा १० किलोमिटर टाढासम्म होम डेलिभरी दिने सुविधा छ । नेपालमा अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला नयाँ सपना देखिरहेको मदनको समूहले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ।
कुनै पनि हालतमा यसको शुद्धतामा सम्झौता नगर्ने दाबी गर्दै उनले व्यवसायमा इमानदारिता आवश्यक भएको बताए । हाइजेनिक र स्तरीय खाना उपलब्ध गराएपछि व्यवसाय कहिल्यै धराशयी नहुने उनको तर्क छ । नेपालीको मात्र नभई विदेशी पाहुनाका लागि पनि यो राम्रो गन्तव्य हुनसक्छ । रेस्टुराँले केही समयमा नियमित ग्राहकका लागि ‘प्रिभिलेज कार्ड’को व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
आजभन्दा ४१ वर्षअघि तराईबाट राजधानी घुम्न आउनुभएका सामान्य किसान दीनानाथ भण्डारीले राम्रो खाना नास्ताका लागि बनाएको सोचको उपज नै आजको ‘बाजेको सेकुवा कर्नर’ हो ।
‘क्लक बि बिजिनेस इन्नोभेसन्स’ले राजधानीमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो सफलताको कथा सुनाउँदै ‘बाजेको सेकुवा कर्नर’ का अध्यक्ष चेतन भण्डारीले भन्नुभयो, “राम्रो पकाउन जान्ने र मिठो खाना खाने बुबाको सौखिन बानी थियो, उहाँ पहिलेदेखि नै दसैँका बेला घरमा काटेको खसीको मासुको विभिन्न परिकार बनाउनु हुन्थ्यो ।” ठूलो हवाईजहाज हेर्न भनेर त्रिभुवन विमानस्थल गएका बेला दीनानाथले राम्रो खाना नास्ता खाने ठाउँ नपाएपछि आफ्नो सीप प्रयोग हुने र व्यापार पनि राम्रो हुन्छ भन्ने ध्येयले विमानस्थल छेउको चौरमा सेकुवा पोल्न सुरु गर्नुभयो ।
त्यसलगत्तै घर सल्लाहपछि व्यवसाय कतै सारौं भनेर सिनामङ्गल नजिकैको खाली चौरको एक कुना भाडामा लिएर व्यावसायिक रुपमा सेकुवा पोल्न सुरु गरेको अध्यक्ष चेतनले स्मरण गर्नुभयो । यसरी सुरु भएको बाजेको सेकुवा व्यवसाय काठमाडौँका १० तथा पोखरा र चितवनमा एक एक ठाउँमा शाखा विस्तार भइसकेको छ । त्यसमध्ये छवटा आफैं र छवटा आङ्गिक स्वामित्वका रुपमा सञ्चालनमा छन् । करिब ३०० जनाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी समेत पाएका छन् ।
खसीको सेकुवाबाट सुरु भएको उक्त व्यवसायले आज ताजा र मिठो खानपिनका लागि मुलुकमै ख्याति कमाएको छ । दौरा सुरुवाल मात्र लगाउने ब्राह्मण जातिका भण्डारीलाई सुरुमा सेकुवा खान आउने ग्राहकले बाजे भनेर सम्बोधन गर्ने गर्थे । कालान्तरमा त्यही नाम उक्त व्यवसायको ब्राण्ड बनेको छ ।
Don't Miss it के गर्ने परीक्षा पछिको समय ? यसरी सदुपयोग गराैँ
Up Next यस्ता राेगहरुकाे समाधान गर्न दैनिक दुई घण्टा उभिऔँ